Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ewubere Alaeze Ukwu Steeti niile maka ezumike
Egwu ezumike na-aga n'ihu na Ụlọ Ọchịchị Alaeze Ukwu (ESB) dị ka akara ngosi akara ngosi na-ekpughere ndị na-ere ahịa mmapụta mpaghara, ihe ịchọ mma ndị kachasị elu, na atụmatụ maka egwu egwu ruo na njedebe nke afọ.
Dị ka taa, windo Fifth Avenue Lobby nke ụlọ ahụ nwere ihe nkiri ezumike nke na-egosipụta ọla edo, ihe na-egbuke egbuke na swiit iji sọpụrụ oge kacha mma n'afọ. Window ndị ahụ dị egwu na-eto site na ndị nwere akara, ọkụ ezumike nke Art Deco, ihe wreath, na osisi ekeresimesi dị elu. Ndị ọbịa ga-agafe na Fifth Avenue Lobby site na Mọnde ruo Fraịde ga-abụkwa egwu ezumike nke ndị ọkachamara pianists mere site n'elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere asaa nke abalị.
Jean-Yves Ghazi, onye isi ala Empire State Building Observatory kwuru, "Enwere ike inwe ọ joyụ nke oge ezumike n'akụkụ niile nke Ahụmahụ Nleba anya anyị echegharịrị, site na ịchọ mma na-atụ egwu ruo na ndị na-ere ahịa mmapụta. "Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị ọbịa ka ha nweta ezigbo ahụmịhe anwansi n'oge kachasị mma n'afọ."
Kwa izu ụka ọ bụla site na njedebe nke November, Alaeze Ukwu State Building ga-ere pụrụ iche brews - gụnyere nke ya "View From Top" Hazy IPA rere nanị na 86th Floor Observatory - na mmekorita ya na Craft + Carry na Five Boroughs Brewing Co. nke Dec. 2, DŌ, Cookie Dough Confections, ụlọ ọrụ kuki kuki na-eri nri dabeere na NYC, ga-ewere 86th Floor dị ka onye na-ere ahịa mmapụta December. DŌ ga-enye ezumike isii na NYC-themed treats from the special 90th Anniversary cart maka izu ụka atọ mbụ na December.
Nnukwu menorah na-ekele ndị ọbịa ka ha na-abanye na Ụlọ Ọrụ Ọchịchị Alaeze Ukwu State Building Observatory Experience, na ohere foto ezumike na Northeast akuku nke 86th Floor Observatory na-enyekwa ndị ọbịa ohere iwere foto ezumike ha kwa afọ na ihe ngosi kachasị mma, ezigbo NYC backdrop. A ga-anọgide na-egosipụta ihe ịchọ mma n'ime ọnụ ụlọ yana na ahụmịhe Observatory ruo Jan. 6.
The Empire State Building Observatory Experience nwetara a $165 nde, n'elu-na-ala reimagination, nke e dechara na December 2019. Renovations gụnyere a raara onwe ya nye ọnụ ụzọ ọbịa, ihe ngosi nka immersive na dijitalụ na tactile ngosi, na kpamkpam reimagined 102nd Floor Observatory. Ndị ọbịa na-erite uru site na nkwalite ụlọ ọrụ na-eduga n'ịdị mma gburugburu ebe obibi (IEQ) - dị ka ihe nzacha MERV 13 na bi-polarization na-arụ ọrụ - maka obi ike ndị ọbịa. Ejikwa ọkụ arụnyere ọhụrụ, ọkụ ọkụ na-eme ka ndị ọbịa na-ekpo ọkụ ka ha na-anụ ụtọ vista oyi na-egbuke egbuke site na obi New York City.
Ọkụ ụlọ elu ama ama n'ụwa nke ụlọ ahụ ga-enwu n'oge ezumike na ọkụ pụrụ iche maka Ekele, Chanukah, Krismas, na Afọ Ọhụrụ.